senkosikazi Novice zivame ukubuza, Zenzeka "Mingakhi imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe?" labapheki abanolwazi uqiniseka ukuthi phisa kwalo mkhiqizo kungenziwa njengelinye lamazwe izinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu ekuphekeni, ngoba kumane nje akwanele wabo ukubilisa. Ukuze isidlo etholwe esihlwabusayo mnandi ukubheka, kubalulekile kahle ukupheka uswidi.
Kunezindlela eziningana ukulungiselela amaqanda, kodwa ngokuvamile okuphekwe soft-abilisiwe, kanzima abilisiwe noma "sikhwama." Abasitholayo esihlwabusayo ikakhulukazi, kubalulekile ukuqonda kangcono ukuthi bangaki imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe , noma, isibonelo, abazingelwa. Kulokhu, igobolondo kumele zisuswe.
Ukulungiselela emanzini ashisayo
Ngaphambi ukupheka umkhiqizo, kudingeka ulinde aze afinyelele ekamelweni lokushisa. I-pan wobulawa uju kuqala futhi uthele amanzi afudumele, bese kancane ujike isibambo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kuya hot agelezé. Ngakho ungagcina isikhathi uma bepheka. Pan kuyadingeka ukuba agqoke umlilo omkhulu. Kubalulekile ukubona ukuthi amanzi amboza sanhlobo, kodwa musa ukugcwalisa isitsha phezulu.
Lapho amanzi amathumba, udinga ukuvala igesi futhi ake iqanda "samanje." Impendulo elula, zingaki imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe ngendlela enzima. Ukupheka isikhathi kuxhomeke kulokho yi kulindeleke. Ukuze uzilungiselele ngokugcwele isikhuphasha nomhlophe, kudingeka ulinde amaminithi eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. umpheki ebilisiwe cishe ezintathu emaminithini, futhi "Kukhonani kulesi sikhwama sakho" lapho isikhuphasha kancane yisisu phakathi - ezintathu emithathu kwamaminithi nengxenye.
Ngenxa yalesi indlela kulungiselelwa amaprotheni inika emnene kakhulu, hhayi "iraba". Ngo amanzi, udinga ukushintshanisa amaqembu ehlukene, ukuze ukupheka ngokulinganayo.
Kukhona idivayisi ekhethekile isetshenziselwa ukupheka amaqanda kule iresiphi. It has a isikali lapho ungakwazi ukunquma degree of ukulungela amaqanda. Base kuphekwe kuze esesimweni esinjalo, njengoba kudingeka, kufanele Ukusetha iwashi. amaqanda abilisiwe etholwe esimweni lapho uphawu ifinyelela phakathi amagugu ezithambile naphakathi. Uma ufuna ukupheka iqanda "Kukhonani kulesi sikhwama sakho", udinga ukumaka safinyelela dash ophansi. Inani isilinganiso medium and kanzima - amaqanda abilisiwe. Awukwazi cabanga ukuthi bangaki imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe, ngokwanele ukuba kuphawule letakhiwe emhlabeni dash kanzima. Futhi amaqanda abazingelwa kungenziwa kuphekwe usebenzisa abicah isikhunta.
amaqanda abazingelwa: ngendlela yendabuko ukupheka
Ukupheka ngaphandle indlela igobolondo evamile, amakhono adingekayo. Umkhiqizo kumelwe siqaphele ukuba ilimaze isikhuphasha, ukugqekeza amanzi abilayo, okwenza kwaba pre-usawoti kanye uviniga. Mingakhi imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe emva abilayo? Kufanele yima baze bafinyelele doneness oyifunayo. Basuke ngokuvamile ezisetshenziswa kuleli fomu in salads futhi wakhonza njengephayona dish side.
Ukupheka ngendlela yendabuko
Indlela elula futhi ajwayelekile kakhulu ukulungiselela - ngamanzi abandayo. Ngakho-ke, singamakhosikazi emizi abaningi bazi mangaki imizuzu ukupheka amaqanda abilisiwe ngamanzi abandayo. Uma amanzi abilisiwe, umkhiqizo kumelwe ulungiselele imizuzu cishe bungamakhilomitha.
Ukuze uthole soft-abilisiwe, kufanele ubeke ngamanzi abandayo futhi emva abilayo, ukunciphisa ukushisa. Eliphekiwe awayona imizuzu engaphezu kwemithathu. Ungakwazi Bilisa amaqanda ngeminithi elilodwa, bese uvala ekushiseni wasiqashisa yenza imizuzu emihlanu.
Ukuze wenze "Kukhonani kulesi sikhwama sakho", udinga ukuqala inqubo ukupheka ngamanzi abandayo futhi emva abilayo, ukupheka imizuzu engaphezu kwemine.
Amaqanda abhekwa fresh izinsuku ezine. Lapho kulungiselelwa enjalo umkhiqizo ukupheka isikhathi kumele kwandisa emva kwamaminithi ambalwa.
Amaqanda bahlanza ngcono kakhulu uma sekuvuthiwe douse kubo ngamanzi abandayo. Ngakho akudingeki wavele ngesikhathi ukupheka, kubalulekile ukuba sithathe epanini encane.
amaqanda izigwaca - esiphundu futhi unempilo!
Lo mkhiqizo uvele izitolo zokuthenga ukudla esanda kutholakala, ngakho-ke akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi imizuzu eminingi ukupheka amaqanda izigwaca abilisiwe. Lokhu uju uqukethe amavithamini amaningi nezakhi ezondla umzimba, ngaphezu kwalokho, kunobuciko emnandi. Uma uzilungiselele kahle, lezi amabhola kancane ezimibalabala, bayoba ukusula umzimba radionuclides, futhi kubekhona ingqondo.
Sekuyisikhathi eside imfihlo ukuthi ziwusizo ikakhulu - kungcono amaqanda aluhlaza. Kodwa ukusebenzisa umkhiqizo ngaphandle kokwelashwa ukushisa abalokothi bonke abathengi. Ngakho-ke kufanele ufunde indlela ukupheka amaqanda izigwaca zonke imithetho bahlale izingxenye eziwusizo.
izindlela eziningana amaqanda ukupheka izigwaca
ukupheka ubuchwepheshe awukudla Motley zingase zingafani, kodwa zonke kahle elula futhi akabubangeli nobunzima ngisho Wabasaqalayo. Umkhiqizo osuphelile kungaba igobolondo noma cha, kanye ngokusebenzisa-microwave oven. Indlela elula - wasigcobhoza emanzini abilayo bese ulinda emva kwamaminithi ambalwa. amaqanda Oku kufanele wageza. Badinga ukuba kwehliswe phezu spoon, ngakho musa iphahlazeke phansi epanini. Lapho Amaqanda zilungele, udinga ukwehlisa kubo emanzini abandayo.
Ukulungisa amaqanda variegated abazingelwa, kudingeka sigqoke umlilo ebhodweni ngamanzi bese wengeza uviniga nosawoti. Ngemva abilayo, kufanele kube ukuxuba kuhle akha vortex. Amaqanda bathele isikhungo yayo eyodwa, kangangokuba isikhuphasha ihlanganiswa ngokuphelele amaprotheni. Govuza kunesidingo kuze ithenda, bese ungakwazi ukubamba amabhola ngesipuni.
Mingakhi imizuzu udinga ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe, incike namuphi umphumela kulindeleke. Ukuze amaqanda abilisiwe Kwatholakala, kubalulekile ukulinda amaminithi ambalwa. Bona okuphekiwe kanzima abilisiwe, uma ulinda cishe imizuzu emihlanu. Abazingelwa ngokwanele for ngomzuzu owodwa. Uma ukwandisa isikhathi amavithamini kanye izingxenye amaminerali ngeke ngokushesha ukuncipha.
Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi zingaki imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe-microwave oven. Ukuze izigwaca kuyinto imizuzu emibili kuphela, futhi inkukhu kungcono ukumelana imizuzu emithathu noma emine. Kodwa kufanele wazi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama eziyisisekelo: Awukwazi ukusebenzisa metal iziqukathi. Microwave kungcono ukubeka emandleni isilinganiso.
Amathiphu namacebo: indlela ubilise amaqanda
Ukuze izitsha mkhiqizo okumnandi is etholwe, kubalulekile ukubuza, zingaki imizuzu ukupheka amaqanda kanzima abilisiwe nendlela upheke kubo. Ngokuvamile emizi wabhekana neqiniso lokuthi basuke kahle bahlanza. Ukuze ugweme ukulimala amaprotheni, kungcono ukusebenzisa amaqanda amadala. freshness yabo kunqunywa kanje: kubalulekile ukuba wehlise umkhiqizo emanzini. Spoiled ahlale phezu futhi fresh eliyocwila.
Endlwaneni is aqhephukile ngesikhathi ukupheka, kubalulekile ukwenza phezulu wokubhoboza encane. Lokhu sizikhandle okwafezwa izinaliti noma kungenzeka ukusebenzisa idivaysi ekhethekile. Uma ukupheka emanzini anosawoti, amagobolondo kuyoba ngcono kakhulu bahlanza.
Ukucacisa lapho iqanda abilisiwe, futhi lapho eluhlaza ngokwanele ukusonta kubo phezu flat. Ebilisiwe ngeke spin ngcono kakhulu kanye nangesivinini kunalokho okuluhlaza.
Ukufakwa nokugcinwa esimweni esihle nokuvikeleka alamu